‘आफै मृत्युसँग लडिरहेकालाई आफन्तको मृत्युको खबर कसरी सुनाउँनू?’ – Health Post Nepal
‘आफै मृत्युसँग लडिरहेकालाई आफन्तको मृत्युको खबर कसरी सुनाउँनू?’
२०७८ वैशाख ३० गते ११:१५
‘हेल्लो वसन्त जी! मेरो त फोनमा बोल्दा बोल्दै स्वर सुकिसक्यो । केही छ भने भनिहाल्नु त !’ बसेको श्वरमा भरतपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा.भोजराज अधिकारीले एकै श्वासमा सोधे।
यसअघि डा. अधिकारीको यस्तो प्रतिक्रिया कहिल्यै हुन्थेन् । फेरी उनले थपे ‘दैनीक सय भन्दाबढी फोन ‘आईसियू खाली छ?’ भन्दै ठूला व्यक्तिबाट नै आउँछ ।’
पछिल्लो एकसाता अधिकारीले सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपरेको र जवाफ दिन परेको प्रश्न यही हो।
‘दिनमा सय फोन बेड खाली छ? विशेष त आईसियूको भनेर बाँके, दाङ, सल्यान, प्युठान, रुपन्देही, मकवानपुर र पर्सा लगायत झण्डै दुई दजन जिल्लाबाट आउँछ,’उनले भने, ‘जबकी एउटै बेड खाली छैन्, बेड खाली हुन मृत्यु वा ठिक हुनपर्‍यो ।’
मेडिकल सिटीको रुपमा ख्याती कमाएको चितवनमा बेड छ कि भनेर अपेक्षा राख्नु पनि अन्यथा होइन्।
तर बेड कहाँ छ र?
टाढाबाट बिरामी ल्याउन बेड खाली छ भन्न सक्ने अवस्था छैन्।
आधि घण्टामा नजिकका तीन एम्बुलेन्स बेड पर्खेरै अस्पतालको गेटमा पहिल्यै हुन्छन् ।
कसरी खाली छ भन्नु?
नसोधी बिरामी ल्याएर आए बाटोमै बिचल्ली हुने अवस्था छ।
डा. अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा बढी फोन रातमा आउँछ।
मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र बिरामीका आफन्तसमेतको एउटै आग्रह हुन्छ। बेड चाहियो।
कतिपय अन्य अस्पतालका मेडिकल अफिसरले रिफरको लागि आईसियू बुझ्ने गर्दछन ।
भरतपुर अस्पतालमा बेड नभएपछि अस्पताल बाहिर बाहिर घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसलाई मध्यजनर गर्दै अस्पतालले आपतकालिन सेवा बढाउन लागेको छ।
‘मान्छे गम्भीर भएर १० दिन लाग्ने ठाउँमा १५ दिन लागेर सञ्चो भएपनि केही हुँदैन । बिरामी मरिहाल्न त भएन नि? पहिला बाच्न पाउने अधिकार कायम गर्न पर्‍यो।’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय तहले राम्रो भुमिका खेल्नुपर्‍यो।’
अहिले लक्ष्ण नभएकाहरुले पनि आइसोलेसनमा अक्सिजन सिलिण्डर राखेको अवस्था छ।
अहिले स्थानीय तहले बनाएका आइसोलेसनमा अक्सिजन छ। जब कि लक्ष्ण नभएका ठाउँमा अक्सिजन राख्नु बेकार हो ।
डा. अधिकारी भन्छन्–‘अस्पतालमै अक्सिजन नपाएर आधा घण्टाअघि हाँसिरहेको मान्छे हेर्दा हेर्दै मरेका छन्।’
अहिलेको अवस्थामा आइसियू सेटप, क्रिटिकल केयर सेवा बढाउनेगरि सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भरतपुर अस्पतालले पनि अन्य सेवा घटाउँदै कोभिड–१९को सेवा बिस्तार गर्दै लगेको छ।
अहिले भरतपुर अस्पतालमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा ६ गुणा अक्सिजनको माग बढेको छ। अहिले यहाँ उत्पादिन अक्सिजनले माग धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ।
‘भरतपुर अस्पतालमा अक्सिजनको पाइपलाईन छ । त्यसबाहेर दैनीक २ सय सिलिण्डर खपत भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘जबकि सरकार ४ सय सिलिण्डर अक्सिजन मात्र व्यवस्था छ, त्यसले कति अस्पताललाई पर्‍याउने?’
अहिले अस्पतालमा क्रिटिकल बिरामी मात्रै रेफर गरेर पालिका अन्तर्गतमै स्वास्थ्यका स्थायी संरचनामा अक्सिजनसहितको प्राविधिक सेवा थपगरी ‘माईल्ड टु मोडरेट सिम्टम’ भएका बिरामीको उपचार प्रवन्ध गर्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन्।
भरतपुर अस्पतालमा कोभिडको पहिलो लहरपछि करिब करिब खाली भइसकेपछि पुनः पहिलेकै अवस्थामा आईपुगेको थियो । तर अहिले आइसियूसहित सबैजसो शैया खाली छैनन् । अन्य सेवा समेत प्रभावित भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय एउटै परिवारको सदस्य पनि एक जना आइसियूमा एकजना एचडियूमा एकजना जनरल बेडमा र एकजना घरमा अक्सिजन लिएर बसिरहेको अवस्था छ।
‘घरको एउटा सदस्यको मृत्यु हुन्छ, त्यही रोगसँग लडिँरहेको अर्को सदस्यलाई मृत्युको खबर कसरी सुनाउँनू?’
भरतपुर अस्पतालमा कोभिडको लागि १ सय ४५ बेड छुट्टाईएको छ । हाल सबै बेड भरिएका छन् । एचडियूमा २५, आईसियूमा १०, साधारण बेडमा १ सय १० जनाको उपचार भैरहेका छ ।
निको हुने भन्दा भर्ना हुनेको संख्या बढी छ । जसले गर्दा बिरामीहरुले सेवा लिन पाइरहेका छैनन् ।
टाँडीबाट आएका कमल सुवेदीले आइसियू भन्दा पनि साधारण बेड पाउन पनि मुस्किल भएको सुनाए।
‘मंगलबार राति चितवनका सबै अस्पतालमा चहार्याँ पाइएन, भरतपुर अस्पतालमा तीन घण्टा पर्खेपछि साधारण बेड पाएँ’ उनले भने “अक्सिजन पनि सहज रुपमा पाउन सकेका छैनौं ।”
चितवनका विभिन्न अस्पतालमा ४ सय ३० जनाको उपचार भइरहेको छ । जसमा २ सय ४०जनाको आईसियूमा उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये अधिकांश गम्भीर खालका बिरामी रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यहाँ चितवन बाहिरका आधा भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ ।
काेराेना स‌ंक्रमित मृत्यु